Soomaaliya oo beenisay in Itoobiya uu ka dhacayo kulan u dhaxeeya Farmaajo iyo Kenyatta. – Kalfadhi
Wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, ayaa beeniyay warar maalmihii la soo dhaafay ay qorayeen Warbaahinta Soomaalida, Kenya iyo midda Itoobiya, kaas oo ku saabsan in Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya uu dhex dhexaadinayo labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Axmed Ciise Cawad, ayaa sheegay in uusan jirin shir 13-ka bishaan ka dhacaya magaalada Adis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya islamarkaana looga hadlayo muranka Badda ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
“Ma jiro mana maqal wax kulan ah oo Soomaaliya iyo Kenya ku dhaxmaraya Itoobiya anniga ayaana qaabilsan arimaha dibadda, marka wararkaas waa kuwa been abuur ah” ayuu yiri Wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad.
“Waxaan rabaa in umadda Soomaaliyeed aan u sheego in uusan warkaas waxba ka jirin” ayuu yiri Wasiir Cawad oo la hadlay Idaacadda BBC-da isagoo ku sugan magaalada London ee xarunta dalka UK.